Ngwongwo na-ahọpụta - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Ogologo ntụkwasị obi ： Akụrụngwa nwere ike ịbụ nkwụsi ike n'otu oge, ma ọ bụ n'ime oge ụfọdụ, ọ bụghị ohere ọ bụla nke nsogbu.
Ihe: gearbox ihe eji eji 20 Cr-Mn alloy, ihe a na - eme ka mgbochi nke ngwaahịa a dịkwuo mma, mekwara ka ike sie ike.
Ezigbo: Na-agbazi ígwè, na-eme ka ihe na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ, ihe na-arụ ọrụ, Carburizing → gri egweri, na-eme ka ndụ nke 5-10 dịkwuo mma.
Ike: idtụle mmetụta nke brik ụlọ ọrụ akụrụngwa ọrụ, ya mere mmụba si imewe nchedo ihe nke 1-2 ugboro.
Structure: Na bughi imewe, dị ka extruders extrusion axial ike ebunye site amị uwe aka na-amị ala biarin, na mgbe ahụ na-agbasa na isi unit, na-eme extrusion igwe spindle enweghị axial ike, naanị radial ike.
Mfe ： Dị ka igwefoto eserese Japan, onye ọ bụla nwere ike iji ya.
Ọrụ arụmọrụ ： Na-atụle ike-arụ ọrụ nke ọma, otu esi etinye ego n'otu atụmatụ ahụ, na-eme ka mmepụtawanye na-abawanye ma na-ebelata ume na nrụpụta nrụpụta ndị ọzọ.
Ọganihu system Usoro robot bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi, na-agbanwe agbanwe ma na-adaba adaba.
Okpomọkụ usoro, ebutu usoro na-acha uhie uhie brik usoro, mbenata ọrụ.
Ọrụ ： Nhọrọ akụrụngwa ga-eleba anya na ike nke ndị na - eweta ọrụ 'mgbe ọrụ na sistemụ ọrụ, dị ike mgbe sistemụ ahịa na-akwado akụrụngwa a tụkwasịrị obi.
Response nzaghachi oge services ọrụ ndị ọkachamara ► radius ọrụ service ọrụ nkwụsị
Echiche ọrụ: iji belata nsogbu ha, obere ihe na-enweghị ihe ọ bụla, maka ọrụ nke aka ha, na-ebelata oge, na-abịaru nso, na-ebelata mmefu, ma na-ebelata ụgwọ, na-eme ka arụ ọrụ ndị ọrụ, na ọrụ ndị ọrụ.
Nhọrọ ： Usoro kwesịrị ekwesị ịhọrọ akụrụngwa kwesịrị ekwesị, enweghị ụdị akụrụngwa zuru ụwa ọnụ nke kwesịrị maka usoro niile.
Dị iche iche ihe dị iche iche green brik Dị iche iche stacking usoro dị iche iche auger
Dị iche iche ịghasa pitch Dị iche iche bugharia ọsọ dị iche iche eletriki ugbu a Ike dị iche iche
Họrọ osisi dị iche iche na-eme brik